Ukuqonda ngcono inkampani yethu ngokusebenzisa i-VR
Iziganeko eziphambili zophuhliso lwebrand
Izixhobo zeBurley zasekwa ngokusesikweni. Kwaye kubalulekile ukuyila kunye nokwenza imoto yezixhobo zamandla.
Izixhobo zeBurley ziqala ukuyila kunye nokwenza izixhobo zamandla, kubandakanya i-angle ginder, ukugawula isarha, ipolishi kunye nompu wobushushu, izixhobo zokuqhuba.
Ukuphuhlisa ngempumelelo uthotho lwabaxube kunye nesimbo sokuxhuba, ikakhulu ukuqinisekisa i-EU kunye neMelika yentengiso.
Ukuyilwa kunye nokuveliswa kwesanders esomileyo.
Yiya kumzi-mveliso omtsha ngobungakanani bezityalo ezingama-7000m2.
Ukufika kwentsebenziswano kunye neempawu ezininzi ezaziwayo kunye neenkokheli zabathengisi.Ukwandiswa kweemveliso ziqala kulungiso lwasekhaya nakwindawo yokwakha.
Yandisa umzi-mveliso omtsha, kunye nelebhu yethu yovavanyo ye-500m2 eqala ukusebenzisa.
Gcina AMANQAKU EMVELISO OOMASifundisane abatsha ukufezekisa amandla emveliso ngakumbi.
Ukuxhotyiswa ngemigca ye-19 yendibano kunye ne-400000pcs yemveliso yamandla.Izixhobo ezizenzekelayo zisetyenzisiwe kwimigca yendibano.
Indawo yokusebenzela yeplastiki yenaliti
Sinabasebenzi abanezakhono, iqela elinamava ayiliweyo kunye neQC enoxanduva.
Inkqubo yokuLungisa iMachining
Ukuxhotyiswa ngoomatshini be-15 + be-CNT kunye ne-24 + yolawulo lwedijithali. Iiseti ezingama-230000 ngenyanga.
Indawo yokusebenzela iimoto
Ngolwazi lweemoto ukusukela ngonyaka ka-1996. Imigca eyi-7 ejikelezayo kunye nemigca emi-5 ye-stator. 350000 iiseti ngenyanga.
20000㎡ yokugcina enendawo yokulayisha ye-150000pcs yeemveliso ezigqityiweyo.
Indawo yokusebenzela paddle
I-100000pcs i-paddles ngenyanga, i-150000 isetha iimoto ezinqabileyo ngenyanga ngeemveliso eziphambili, i-10000 isetha i-laser ukusika iindawo ezingabonakaliyo ngenyanga.
Ilebhu yokuvavanywa kwama-500㎡ iyakwazi ukwenza ubushushu be-EMC ROHS ngovavanyo lokuguga kwamasuntswana eplastiki njl.
Iimveliso zithunyelwa kwamanye amazwe